ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: ရခိုင်အရေး “ဆွ” ပေးသူတွေထဲ သမ္မတရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူး မှူးဇော်တယောက် မပြေးသော် ကန်ရာရှိ ပါဝင်နေသည်ဟု ယူဆထားသူတွေအတွက် မှူးဇော်၏ အိုးနင်းခွက်နင်း ဝေ့လည်ကြောင်ပတ် ပြန်လည်ဖြေကြားချက်များ (အသံ)
ရခိုင်အရေး “ဆွ” ပေးသူတွေထဲ သမ္မတရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူး မှူးဇော်တယောက် မပြေးသော် ကန်ရာရှိ ပါဝင်နေသည်ဟု ယူဆထားသူတွေအတွက် မှူးဇော်၏ အိုးနင်းခွက်နင်း ဝေ့လည်ကြောင်ပတ် ပြန်လည်ဖြေကြားချက်များ (အသံ)
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 6:23 PM
Fuck you , zaw htay.
you are as same as stupid puppet president.
when you are being asked specific question, you must answer it.
If you can't answer you should not accept any media call or invitation.
you are the one of most responsible guy for those serious conflict in Rakhine state which you must not ignore.
If there is more open and free society growing in Burma,there will be no place for you and your dictators.
ဇော်ဌေးမှာ ဖြေစရာမရှိဘူး။ သူဆွခဲ့တာတွေ အတွက် အဖြေမရှိဘူး။ ပြည်ပကနေ လက်နက်ကိုင်တွေ ကျူးကျော်လာပြီလို့ ဖဘကနေရေးပြီး ရခိုင်တွေရော မွတ်ဆလင်တွေရော သွေးမြေကျအောင် လုပ်ခဲ့တာ တွေအတွက် သူ့မှာ အဖြေမရှိဘူး။ နောင်တချိန် ခုံရုံးမှာ သူဆက်ဖြေရလိမ့်မယ်။ ဘီဘီစီက သူမဖြေဘဲ ရှောင်သွားတာကို ရအောင် ဆက်မမေးဘူး။ သတင်းသမားကောင်း မပီသဘူး။ ညံ့လွန်းတယ်။ ဟာ့ဒ် တော့က် မှာ စတီဖင် ဆက်ကာ မေးသွားတာနဲ့ ယှဉ်ကြည့်ရင် ဘီဘီစီချင်း အတူတူ မြန်မာဌာနက စောက်သုံးမကျတာတော်တော် ပေါ်တယ်။
မှူးဇော်ကို ခုံရုံး တင်ရအောင် မင်းတို့က ဘာစောက်ဆင့် ရှိလို့လဲ တန်ရာပြောကြစမ်းပါ သူမြှောက်ပေးတိုင်း ဖြစ်ရအောင် ရခိုင်တွေက ငတုံးတွေမှမဟုတ်တာ တိုင်းပြည်အတွက် လုပ်သင့်လို့လုပ်ခဲ့တဲ့ သူတွေကို သေးသိမ်အောင် မပြောနဲ့
AK47 for Everyone said...
အမျိုးယုတ် မှူးဇော် တိုင်းပြည်သစ္စာဖောက်မှူးဇော်နှင့် မဟုတ်မမှန်လုပ်ကြံသတင်းများဖြင့် ပဋိပခက်ဖြစ်စေရန် သွေးထိုးနေသော သမ္မတညွန်ကြားရေးမှူးရုံးမှ ၀ါဒဖြန့် စစ်ခွေးများ အားလုံး လီးပဲ။ အပေါ်က ct နဲ့ nay hlaing ဆိုတဲ့ အမျိုးယုတ်သစ္စာဖောက်တွေ နှစ်ယောက်ထဲက တယောက်ယောက်ကတော့ ဖာခေါင်းမှူးဇော်ဆိုတာ သေချာတယ်။ နောက်တကောင်ကတော့ မှူးဇော်ရဲ့ မအယ်ပါသားပဲနေမှာ။ မင်းတို့ပဲဒီကိစ္စကိုဖြစ်အောင်မီးမွေးတာ အပြစ်မဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ သွေးတွေ ဒုက္ခတွေငရဲတွေ အတွက် မင်းတို့ကောင်တွေလက်မှာ စွန်းထင်း အကြွေးတင်သွားပြီဆိုတာ နားလည်လာ။ ဒါတွေကိုမင်းတို့ တနေ့ပြန်ဆပ်ရမယ် ဆိုတာ ဦးဏှောက်ထဲ မှတ်ထား။ အသေဆိုးနဲ့သေမဲ့ ခွေးမျိုး ကိုမေကိုးတွေ ..
သူတို့ ရခိုင်အရေး ဖန်တီးရခြင်းရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်က ရှင်းရှင်းလေးပါ ။ သူတို့ ဖန်တီးထားတဲ့ စစ်မှန်ခြင်းမရှိသော ရိုးသားခြင်းမရှိသော မူမှန်မှုမရှိသော ဒီမိုကရေစီအတု အပေါ် နိင်ငံတကာနဲ့ ပြည်သူတွေ လက်ညိုးထိုးလို့ ဖိအားပေးခြင်းမှ သက်သာအောင် အာရုံတခြားတို့ ရောက်နေစေရန် စီစဉ်ထားတဲ့ မဟာဗျူဟာကြီးတခုဆိုတာ ရှင်းရှင်းလေးပါ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပေါ်မှာ ပြည်သူတွေ ယုံကြည်မှုနဲပါးသွားစေရန် အတွက်လဲ အဓိက ရည်ရွယ်ထားတာတွေပါ။ ပြည်သူအများ သတိရှိကျပါ ။ သတိ နအဖ စစ်ခွေးများ ဆက်ရ်ျခြေပုန်းခုတ်နေသည်။
ကုလားထိနာနေကြတဲ့ ကုလားအောက်ဆွဲတွေ .....
သမ္မတ ရုံအတွင်း ဘာမှမယ်မယ်ရရမလုပ်ဘဲ ကွန်ပျူတာ ကီးဘုတ်ကိုင်ရ်ျ လူသတ်နိုင်ငံဖျက်လုပ်နေသော ကိုမေကိုး ဇော်ဌေး (ခ) စောက်အမျိုးယုတ် မှူးဇော် မင်းဖအေသိန်းစိန်ကို တရက်ဘယ်နှခါကုန်းပေးရသလဲ အမျိုးယုတ်ရ။
ကုလားစုတ်တွေက သူတို့အကြံ မအောင်လို့ အပြစ်ရှာနေတာ ခွေးပါးစပ်က နတ်စကားထွက် ပြီး ကုလားစုတ်က လူ့အ ခွင့်ရေးတွေ ဘာတွေ အော်နေသေးတယ် မတန်မရာ
ရိုဟင်ဂျာ ကိုးကန့် အဲ့ဒီ ကုလားနဲ့တရုတ်
ko mg said...
ဘာသာတရား မရှိတဲ့ ကွန်မြူနစ် လွဏ်းဆွေ
ဘယ်သူဘာလုပ်လုပ် အကောင်းမမြင် တတ်တာ ဆရာကြီး လုပ်တတ်တာ ငါအသိဆုံးပဲ လွဏ်းဆွေ။
နိုင်ငံခြားသတင်းမီဒီယာ တွေကို အလဲထိုးနိုင်ခံတာတော့ အမှန်ပဲ...